Riyaawad Shakespeare oo lagu dhigayo Hargeysa - BBC News Somali
Riyaawad Shakespeare oo lagu dhigayo Hargeysa
Kooxda riwaayadaha caanka ku ah ee tiyaaterka shakespear ee London oo qaaradaha adduunka ku wareegayay beryahanba oo Arbacadii shalay galab ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, ayaa maanta faah-faahin ka bixiyay socdaalka magaalooyinka adduunka.
Waxay Hargeysa noqoneysaa magaaladii 71aad ee kooxdani Shakespeare ay riwaayyad ka dhigaan socdaalkoodan caalamiga ah oo soo bilaabmay 23-kii April 2014, sidaasina waxaa sheegay madaxa kooxdan Dominic Dromgole warsaxaafadeed uu u qaybiyay maanta warbaahinta.
Wuxuu sheegay in ay hore u soo mareen kooxdani 70 magaalo oo ku kala yaalla wadamo kala duwan ee qaaradaha Yurub, Ameerika iyo Afrikada Bari. Wuxuu intaa ku daray Dominic in kooxdani ay mari doonaan in ka badan laba boqol oo magaalo oo ay riwaayadahii shakespeare ka dhigayaan, gaar ahaan sheekada caanka ah ee Helmet.
Kooxdan, waxay ka kooban tahay 17 jilaa, waxayna Hargeysa ka dhigayaan riwaayada lagu magacaabo Helmet oo uu qoray Shakespeare. Waxayna riwaayadan Helmet ku saabsan tahay sheekadeedu dhiillaha iyo kala aargoosiga laba ilma boqor ah ee dalka Denmark oo kala shakigoodii keenay in midkood uu waasho.
Kooxdan masraxa caanka ah ee Globe Theatre ee Magaalada London, waxay sheegeen inay socdaalkoodan hadda riwaayado ka soo dhigeen Magaalada Jabuuti, Hargeysa kadibna u gudbi doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waxay sheegeen in socdoolkooda oo qaadan doona laba sano ay ugu talo galeen in dhammaan dalalka aduunka ay riwaayadaha Shakespeare ka dhigaan, iyagoo sheegay in ay haatan saddex meelood meel ahaan ay dalalka adduunka ka soo dhigeen. Waxay sheegeen in dad gaaraya 60,000 ruux ay daawadeen riwaayadihii socdaalkoodan ay ku soo dhigeen dalalkii ay soo mareen laga soo bilaabo April 2014.